Ammonium Chloride (အမိုနီယမ်ကလိုရိုက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ammonium Chloride (အမိုနီယမ်ကလိုရိုက်)
Ammonium Chloride (အမိုနီယမ်ကလိုရိုက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ammonium Chloride (အမိုနီယမ်ကလိုရိုက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ammonium Chloride ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Ammonium Chloride ကို isotonic sodium chloride injection နဲ့ပေါင်းပြီး သွေးအတွင်း chloride ဓါတ်နည်းတဲ့ အခြေအနေနဲ့ metabolic alkalosis ကို ကုသဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Ammonium Chloride ဟာ NH4Cl ပါဝင်တဲ့ inorganic ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရေမှာကောင်းစွာ ပျော်ဝင်တဲ့ အခဲတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Ammonium Chloride ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
Ammonium Chloride ထိုးဆေးကို အကြောတွင်းထိုးသွင်းပြီး အသုံးမပြုခင် အရည်နဲ့ ရောသင့်ပါတယ်။ အကြောတွင်းထိုးသွင်းမယ့်ဆေးမှာ Ammonium Chloride ပြင်းအား 1%-2% ထက်ပိုပြီး မပါသင့်ပါဘူး။
Ammonium Chloride ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသလဲ။
ဆေးအများစုမှာ အခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထား နိုင်ပါတယ်။
Ammonium Chloride ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Ammonium Chloride ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Ammonium Chloride ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Ammonium Chloride ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Ammonium Chloride ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Ammonium Chloride အသုံးမပြုခင်မှာ အောက်ပါအခြေအနေတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
• Ammonium Chloride (သို့) အခြားဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်
• ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးတွေ (သို့) ဗီတာမင်အပါအဝင် ဆေးဆိုင်က ဝယ်သောက်တဲ့ဆေးတွေ သောက်နေရင်
• ကိုယ်ဝန်ရှိရင် (သို့) ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ စိတ်ကူးရှိရင် (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေရင်
• အသည်း (သို့) ကျောက်ကပ် ပျက်စီးမှု ရှိရင်
Ammonium Chloride က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
• ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ နာကျင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း
• အနီရောင် အကွက်ထခြင်း
• နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကိုမာဝင်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Ammonium Chloride နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Ammonium Chloride ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Ammonium Chloride နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Ammonium Chloride က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Ammonium Chloride နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Ammonium Chloride ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• နှလုံးကြောင့်ဖြစ်သော ဖောရောင်မှု
• ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် များခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Ammonium Chloride ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
လူကြီး – ရောဂါပြင်းထန်မှုနဲ့ လူနာခံနိုင်ရည်အားပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ရေရောပေးသင့်ပြီး သွင်းနှုန်းဟာ 5ml/min ထက် မကျော်လွန်သင့်ပါဘူး။ သွေးအတွင်း bicarbonate ကို စစ်ဆေးပြီး ဆေးပမာဏကို ထိန်းညှိသင့်ပါတယ်။
Reconstitution – အသုံးမပြုခင် ရေရောသင့်ပြီး နောက်ဆုံးပြင်းအားဟာ ammonium chloride 1%-2% ထက်မကျော်လွန် သင့်ပါဘူး။ Ammonium choloride 100-200mEg ပါဝင်တဲ့ အရည်တွေကို sodium chloride 500-1000ml နဲ့ အရင်ရောပေးသင့်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Ammonium Chloride ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Ammonium Chloride ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Ammonium Chloride ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ထိုးဆေး: 100 mEq (5 mEq/mL)
ဆေးလွန်ခြင်းဟာ metabolic acidosis၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်းနဲ့ ကိုမာဝင်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကုသမှု – alkaline အရည်တွေဖြစ်တဲ့ sodium bicarbonate (သို့) sodium lactate ကို ပေးသင့်ပါတယ်။
Ammonium Chloride ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Ammonium Chloride Intravenous. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-18610/ammonium-chloride-intravenous/details. Accessed Aug 15, 2016.
Ammonium Chloride. https://www.drugs.com/pro/ammonium-chloride.html. Accessed Aug 15, 2016.